Seychelles waxay qarka u saaran tahay inay noqoto xarunta daraasaadka nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
(Maqaalka asalka ah: Qaranka Seychelles. Juun 14, 2016)
Jaamacadda Seychelles ayaa ku dhawaaqday inay ka fikirayso sidii ay u samayn lahayd xarun caalami ah oo lagu barto barashada nabadda iyo diblomaasiyadda iyada oo hagista khabiirka iyo waayo -aragnimada Madaxweynihii aasaasay Seychelles Sir James Mancham.
Xaqiiqdii fikradda Seychelles ee martigelinta xarunta caalamiga ah ee daraasaadka nabadda iyo diblomaasiyadda waa hindisaha Sir James.
Jaamacadda Seychelles (UniSey) ayaa sheegtay in kani yahay mashruuc hami leh oo waqtigiisii ​​ku soo kordhaya sumcadda Seychelles oo ah dal nabdoon oo wax ku kordhinaya bulshada caalamka.
"Waxayna taageeri doontaa dadaalka jaamacadda si loo horumariyo aagag cilmi -baaris iyo fursadaha koorsada," ayay raacisay UniSey.
Maxaa loo baraa nabadda?
Mawduuca barashada nabadda waa mid xiiso leh sida ay muhiim u tahay:
waxay ku saabsan tahay dagaal iyo sidoo kale nabad;
waxay laabta ku haysaa argagixisada iyo iska horimaadyada qaranka;
waa daraasad tacliimeed laakiin sidoo kale waa mid wax ku ool ah;
wuxuu u dhexeeyaa soohdimaha diinta ilaa geeska siyaasadda adag;
waxay dhiirri-gelinaysaa dood aan la taaban karin laakiin kama baaqsan karto xallinta dhibaatooyinka;
waxay ku soo qaadanaysaa maaddooyin kala duwan laakiin ma leh midna; iyo
waxay wax ka qabataa dhacdooyinka iska soo horjeeda ee iskahorimaadyada meelo kala duwan oo adduunka ah.
Marka la eego dabeecadda baahsan ee iskahorimaadyada qaranka iyo kuwa caalamiga ah - iyo isku dayo ka dhashay sidii loo xallin lahaa - ma aha wax la yaab leh in daraasadaha nabadda ay booskooda ka qaateen masraxa adduunka. Waxaa jira wax badan oo la fahmi karo, wax badanna la qaban doono. Laakiin dhulku sinaba uma buuxo, baahida loo qabo in wax badan la qabto sinaba lama kulmin. Xarunta cusubi waxay yeelan doontaa kaalin muhiim ah oo ay ciyaarto.
Siyaasad ahaan, Jamhuuriyadda Seychelles waa jasiirad yar oo saaxiib u ah ummadaha kale khatarna ku ah midna; dhexdhexaadnimadeedu waa tixgelin muhiim ah. Runtii, dhex-dhexaadnimadu waxay suurtogalisay isku-day aad loo ammaanay oo Madaxweynaha, James Michel, uu heshiis ku dhex-marinayo kooxaha iska soo horjeeda ee Madagascar xilli ismari-waa siyaasadeed jiro.
Bulsho ahaan, dalku wuxuu leeyahay riwaayad qiiro leh oo ah is -dhexgalka qowmiyadeed. Waxaa si weyn loogu tiriyaa bulsho nabdoon. Halkee ka fiican in laga helo xarun caalami ah oo lagu barto nabadda?
Juquraafi ahaan, waxay ku taallaa Badweynta Hindiya, saacado yar uun bay ka timid qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe, oo ah laba gobol oo khilaafaadka qaran iyo kuwa gobolku ay marar badan daliil u yihiin.
Deegaan ahaan, Seychelles waa makaa dalxiisayaasha qiimeeya tayada gaarka ah ee jasiiradeeda iyo badaha turquoise -ka ah. Maaddaama ay tahay meel xasilloon oo xasilloon oo laga wada xaajoodo dagaalka iyo nabadda, way adag tahay in la qiyaaso goob ka habboon.
Laakiin waxaa jira sabab kale oo iyaduna sababta meeshaani ugu habboon tahay. Sannado badan, Madaxweynihii ugu horreeyey ee Jamhuuriyadda Seychelles, Sir James Mancham, wuxuu xiriirro kala duwan la sameeyay ururo badan oo caalami ah, isaga, laftiisuna, waa afhayeenka caanka ah ee nabadda iyo dib -u -heshiisiinta. Dhawaan uun baa la guddoonsiiyey Abaalmarinta Nabadda Afrika ee sannadka 2016.
Sababahan oo dhan awgood, Seychelles waxay isku deyday soo jeedintan hal -abuurka ah si loo sameeyo xarun joogto ah oo loogu talagalay barashada nabadda ee Badweynta Hindiya.
Maxaa la soo jeediyay?
Ujeeddada xaruntu waxay noqon doontaa inay bixiso xarun caalami ah oo lagu barto nabadda iyo inay kaalin firfircoon ka qaadato xallinta khilaafaadka iyo sidoo kale tababarka diblomaasiyiinta.
Guddoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Seychelles ayaa si shaqsi ah mas'uul uga noqon doona horumarinteeda, waxaana gacan ka geysan doona maareeyaha mashruuca oo marka hore baari doona goobta, diyaarina doona dhismaha xarunta. Lacag ayaa dibedda looga raadin doonaa ballamaha takhasuska leh iyo bixinta qol xafiis oo si fiican loo magacaabay, oo ku dhex yaal xerada Anse Royale ee jaamacadda.
Ballanta hore ee barafasoorka barashada nabadda iyo taageerada aqoonyahannada booqanaya ayaa bixin doonta hagitaan takhasus leh si loo horumariyo barnaamij ku habboon cilmi -baarista iyo waxqabadyada.
In kasta oo xaruntu ku taal Anse Royale haddana waxaa la filayaa in wadahadalo heer sare ah lagu diyaariyo agagaar ku yaal mid ka mid ah jasiiradaha badan ee qaranka.
Waa maxay waxqabadyada dhici doona?
Barafasoorka la soo jeediyay ee barashada nabadda ayaa bixin doona hoggaaminta tacliimeed iyo xirfadaha gorgortanka ee la xaqiijiyay.
Xaruntu waxay ahaan doontaa xarun xogeed iyo waliba goob ay ku kulmaan dhakhaatiirta iyo aqoonyahannadu. Shirarku waxay ka mid noqon doonaan hawlaha xarunta.
Iyada oo ay hoos timaaddo UniSey, waxay bixin doontaa Shahaadada Masterka ee daraasaadka nabadda ee ardayda maxalliga ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah, oo ay weheliso fursadaha cilmi-baarista doctoral-ka iyo dhakhaatiirta kadib.
Marba marka ka dambaysa, la -talintu waxay kaalin muhiim ah ka qaadan doontaa shaqada xarunta, iyada oo loo xilsaarayo inay fuliso dhinacyo kala duwan oo xallinta khilaafaadka ah.
Sidee loo maalgelin doonaa?
Ku lug lahaanshaha gudoomiye ku xigeenka iyo magacaabista maareeyaha mashruuca waxaa bixin doona UniSey, halka Sir James Mancham uu gacantiisa ku jiri doono talo khabiir.
Codsiyada waxaa loo samayn doonaa hay'adaha maalgelinta dibadda si ay u suurtogeliyaan magacaabista khabiir ku takhasusay barashada nabadda iyo bixinta hoy ku habboon.
Sidee loo maamuli doonaa?
Guddi Ammaano - oo uu guddoomin doono Sir James Mancham - ayaa la magacaabi doonaa, oo mas'uul ka ah in la hubiyo in hawsha xarunta la ilaaliyo iyo in maaliyaddu si caqli iyo xilkasnimo leh loo isticmaalo. Ammaan -bixiyeyaasha ayaa sidoo kale mas'uul ka noqon doona magacaabista iyo kormeerka istiraatiijiyadeed ee waxqabadka professorka. Maalin kasta, xarunta iyo shaqaalaheeda waxay si toos ah ula xisaabtami doonaan guddoomiye ku xigeenka UniSey.
Laba Anthologies of Betty Reardon ee Work: A Pioneer ee Waxbarashada Nabadda iyo Jinsiga
Video: Betty Reardon & Anwarul Chowdhury oo ka hadlaya Daisaku Ikeda "Khudbadii Aduunka Badashay"
Dhallinyarada reer Ciraaqi, waa furaha Nabadda waarta
August 11, 2020 Warar & Muuqaal, Dhalinta diirada la saaray 0
UNDP Ciraaq iyo Ciraaq Al-Amal Association bilaabay wajiga koowaad ee mashruuca Waxbarashada Nabadda ee Ogosto 2016, ujeedadiisu tahay in ay awood u jaamacadaha Ciraaq si ay saameyn fiican ku yeeshaan nabadda iyo isbadalka khilaafaadka. [sii wad akhriska…]
PJSA waxay raadineysaa Agaasimaha Fulinta cusub
Ururka Daraasaadka Nabadda iyo Caddaaladda (PJSA), oo ah urur ay ku mideysan yihiin Kanada iyo Mareykanka, ayaa raadinaya maamule khibrad leh iyo hoggaamiye horumar leh booska Agaasimaha Fulinta. ED wuxuu si dhow ula shaqeeyaa 20 + qof oo firfircoon Guddiga Agaasimayaasha si loo dejiyo yoolalka loona caddeeyo aragtida Ururka iyo in la sameeyo istiraatiijiyado iyo qorshooyin lagu gaaro himilooyinkaas. ED waxay kaloo maamushaa arrimaha ganacsiga ee Ururka, oo ay kujirto talobixinta iyo hirgalinta miisaaniyad sanadeedka, u adeegida Tifatiraha joornaalka joogtada ah, iyo la shaqeynta Guddiga aruurinta iyo deeq-qorista. [sii wad akhriska…]
Bare ka tirsan Daraasaadka Nabadda iyo Caddaaladda, Jaamacadda Pace, New York
Barnaamijka Daraasaadka Nabadda iyo Caddaaladda ee ka dhex jira Dyson College of Arts and Sciences ee Jaamacadda Pace ayaa ku martiqaadaya codsiyada boos la filayo macallinnimo ee darajada Lecturer (hagaha muddada aan joogin) si loo bilaabo Sebtember 2018. Xilliga kama dambaysta ah ee arjiga: Diseembar 30, 2017. [sii wad akhriska…]